फोनिज तनहुँको अध्यक्षमा श्रेष्ठ – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. फोनिज तनहुँको अध्यक्षमा श्रेष्ठ – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
तनहुँ । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) तनहुँको चौथो अधिवेशनबाट अध्यक्षमा किरण श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
त्यस्तै श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ११ सदस्यि कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको छ । समितिको उपाध्यक्षमा सुमन श्रेष्ठ, सचिवमा ममता गुरुङ्ग, सह–सचिवमा सुबिना थापा मगर, कोषाध्यक्षमा संजय श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
त्यस्तै सदस्यहरुमा मिलन तामाङ्ग, नुक्त भुजेल, एलोज श्रेष्ठ, मोहनराज आले, करुणा थापा मगर, करिष्मा गुरुङ्ग चयन भएका छन् । त्यस्तै प्रदेश प्रतिनिधिमा प्रताप राना मगर, सुशिला थापा मगर, सुमन श्रेष्ठ, राजकुमार श्रेष्ठ र राजकुमार आले चयन भएका छन् ।
त्यस्तै केन्द्रिय प्रतिनिधिमा विष्णु मास्की मगर, सन्तोषी श्रेष्ठ, राजकुमार श्रेष्ठ र राम बहादुर धामी चयन भएका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २५ मंसिर २०७८, शनिबार December 11, 2021 392 Viewed